चितवनमा कोरोना संक्रमित हुनेहरु अधिकांश विवाह, व्रतबन्ध र भोजभतेरमा जानेहरु – Radio Prabhav 92.4 Mhz
May 7, 2021 गृहपुष्ठ / समाज
बैशाख २४, शुक्रबार चितवन : चितवनमा कोरोना संक्रमितहरु मध्ये अधिकांश विवाह, व्रतबन्ध, पूजाआज लगायतका भोजभतेरमा जानेहरु रहेको पाईएको छ । वैशाख पहिलो सातापछि यस्ता कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरु संक्रमित भएको पाईएको हो ।
स्वास्थ्य कार्यालय चितवन र भरतपुर महानगरपालिकाले संक्रमितहरुसँग गरिरहेको सर्वेक्षणमा अधिकांश भोजभतेरमा सहभागी भएको देखिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी गीतागञ्जली ढकालले कान्तिपुर हेल्थलाई दिएको जानकारी अनुसार कार्यालयमा दुई जना कर्मचारीले वैशाख १६ गतेबाट संक्रमितहरुलाई फोन गरेर संक्रमणको कारणबाट सर्वेक्षण गरिरहनु भएको छ । दैनिक ५० जना हाराहारीलाई फोन गर्दा अधिकांशले विवाह, व्रतबन्ध, पूजाआजा जस्ता कार्यक्रमबाट फर्किएपछि आफू संक्रमित भएको बताएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “गत वर्ष धेरैले अस्पताल आएर फर्किएपछि संक्रमण भएको भन्थे, यस वर्ष भोजभतेरमा गएरपछि संक्रमण भएको भनेका छन् ।” टेलिफोनबाट सर्वेक्षण गर्ने कार्य जारी रहेकाले एकिन तथ्यांक नआए पनि अधिकांशले भोजभतेरमा गएको बताएको उहाँको भनाई छ ।
वैशाख यता मात्रै जिल्लामा एक हजारभन्दा बढी संक्रमित भईसकेका छन् । पछिल्ला दिनहरुमा दैनिक दुई सयभन्दा बढी संक्रमण देखिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाका कोभिड १९ सम्पर्क व्यक्ति केशव भट्टले महानगरपालिकाले गरिरहेको सर्वेक्षणमा पनि अधिकांशले विवाह, व्रतबन्ध, भोजभतेरमा सहभागी भएपछि संक्रमणमा परेको बताएको जानकारी दिनुभयो । कतिपयले जिल्ला बाहिर गएर आएपछि संक्रमणमा परेको पनि जनाएको उहाँले बताउनुभयो । भट्टले भन्नुभयो “अधिकांश भोजभतेरबाटै संक्रमण फैलिएको पाईयो ।” महानगरपालिकाले पाँच समूह बनाएर वडा छुट्टाएर संक्रमितहरुसँग सम्पर्क गरिरहेको छ । दुई दिनदेखि महानगरले सम्पर्क कार्य थालेको हो ।
भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारीले विवाह, व्रतबन्ध, पूजापाठसँगै दलका कार्यक्रमहरु पनि संक्रमण समुदायमा पु¥याउनमा जिम्मेवार रहेको देखिएको कान्तिपुर हेल्थलाई बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले गरेको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेकै कारण यो अवस्था आएको हो । विवाहको लगन अघि सत्ता पक्ष र विपक्षी सबै दलले आआफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर देशैभर सभासम्मेलन गरेका थिए । ती कार्यक्रम पनि समुदायमा कोरोना पु¥याउन सहयोगी बनेको फिजिसियन समेत रहनु भएका डा. अधिकारीको बुझाई छ । आम सर्वसाधारणले कोरोनालाई हल्का रुपमा लिंदा यो अवस्था सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दीपक तिवारी गएको फागुनदेखि नै सन्देश प्रवाह गरेर भोजभतेर, सभासम्मेलनमा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी नहुन अनुरोध गरेको भए पनि अटेर गरिएका कारण संक्रमण धेरै फैलिएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो “२५ जनालाई भन्दा मानिसहरुले विभिन्न अर्थमा व्याख्या गरे, अहिले यो अवस्था सिर्जना भयो ।” विवाह, व्रतबन्ध जस्ता कार्यक्रममा २५ जनाभन्दा बेहुलापट्टीको २५ र बेहुलीपट्टीको २५ भन्दै फरक फरक व्याख्या गरेर सरकारले गरेको निर्देशन अधिकांशले अटेर गरेका थिए । गत वर्ष पनि यस्ता कार्य हुन नसकेकाले कोरोना सक्किईहाल्यो नि भन्दै धेरैले मन फुकाएर आफन्त डाक्ने गरेको तिवारीको भनाई छ ।
गत वर्षको चैतमा लकडाउन भएपछि त्यस यता विवाह, व्रतबन्ध, पूजाआजा जस्ता कार्यक्रम रोकिएका थिए । गत फागुन देखि वैशाख पहिलो हप्तासम्म पनि शुक्रअन्ध भएका कारण शुभकार्य गर्न नहुने धार्मिम मान्यता थियो । लामो समयदेखि रोकिएका यस्ता कार्यक्रम वैशाख पहिलो हप्तापछि धमाधम भएका थिए ।